မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးဌာန၊ မိုးကုတ်မြို့
(၁) မိုးကုတ်ဒေသကို အစဉ်အလာအားဖြင့် ပတ္တမြားမြေဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်မှ စတင်၍ ကျောက်မျက်တူးဖော်မှုလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၂) ( ၁၉၄၈ ) ခုနှစ် ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဖ.ဆ.ပ.လ အစိုးရမှကျောက်တွင်းလုပ်ငန်းများကို လိုင်စင် စနစ်ဖြင့် ချထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၃) ( ၁၉၆၂ ) ခုနှစ် ၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်တွင် လိုင်စင်အခွန်ပေးဆောင်စေလျက် ကျောက်မျက်တူးဖော်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
(၄) ( ၁၉၆၄ ) ခုနှစ်တွင် ဓါတ်သတ္တုတိုးချဲ့ရှာဖွေရေးကော်ပိုရေးရှင်းဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(၅) ( ၁၉၇၆ ) ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၁ ) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်ပြီး နိုင်ငံပိုင် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၆) ( ၁၉၈၉ ) ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ( ၁ ) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ကော်ပိုရေးရှင်းမှ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းသို့ အမည်ပြောင်းလဲ၍ ကျောက်မျက်တူးဖော်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၇) (၁၉၉၀)ခုနှစ်တွင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖက်စပ်စနစ်ဖြင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၈) ( ၁၉၉၅ ) ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေပြဌာန်းပြီး ( ၅ . ၁၀ . ၁၉၉၅ ) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ၊ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးစခန်းများကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
(၉) ( ၁၈.၁.၂၀၀၁ ) ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် ၊ ၈၇ / ၂၀၀၁ ကို ထုတ်ပြန်၍ ရတနာနယ်မြေ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၀) (၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့်အကျိုးတူးပူးပေါင်း၍ ကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။